Cali Guudlaawe oo loo ogolaaday Baladweyne, xogtii ugu dambeysay go’aan ay qaateen Beesha dagta Baladweyne - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Cali Guudlaawe oo loo ogolaaday Baladweyne, xogtii ugu dambeysay go’aan ay qaateen...
Cali Guudlaawe oo loo ogolaaday Baladweyne, xogtii ugu dambeysay go’aan ay qaateen Beesha dagta Baladweyne
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaa la rajeynayaa inuu tago magaalada Baladweyne, maalmaha nagu soo wajahan, kadib markii beesha u badan gobolka Hiiraan ay ogolaatay in waan-waan laga galo khilaafka muddada jiray.
Xildhibaanno hore, siyaasiyiiin iyo waxgarad is-kaashtay, ayaa ka shaqeeyay socdaaka uu Guudlaawe ku tagayo Baladweyne oo uusan cagta saarin taan iyo markii Madaxtooyada Soomaaliya u boobtay kursiga Madaxweynaha maamulkaas.
Madaxwayne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar (Dabageed) ayaa hore u sheegay in Madaxwaynaha maamulkaas Cali Guudlaawe oo loo diido imaashaha Beledwayne ay keenayso in aan doorasho lagu qaban xarunta gobolka Hiiraan.
Inkastoo Dabageed, uu isku dayay inuu inuu xoog ku maquuniyo hoggaamiyaha jabhadda la magac baxday Kacdoonka Gobolka Hiiraan, Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud), haddana taasi ma suura galin, waxaase hadda muuqda in ay jirto isku soo dhawaansho wadahadal iyo wada-xaajood ku timid.
Guudlaawe, ayaa Axmed Madoobe kala mid ah dalabka ku aaddan in hal magaalo lagu soo koobo doorashooyinka, hayeeshee, booqashadiisa Baladweyne, ayaa fududeyn karta is-fahanka Madaxweynaha Hirshabeelle iyo bulshada Gobolka Hiiraan.
Farmaajo ayaa bedelay nidaamka awood qeybsiga HirShabeelle, isagoo ka leh ujeeddo doorasho, wuxuuna ka dhigay Madaxweynaha mid isaga taageersan oo kuraasta Xildhibaanada Federaalka u boobi kara.